အာဟာရလား၊ အန္တရာယ်လား … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » အာဟာရလား၊ အန္တရာယ်လား …
အာဟာရလား၊ အန္တရာယ်လား …
Posted by ဆူး on Sep 25, 2010 in Drama, Essays.., Food, Drink & Recipes, Health & Fitness, Short Story |6comments
2010 အာဟာရလား အန္တရာယ်လား
နရီလင်းလက် Wednesday, September 22, 2010
လွန်ခဲ့တဲ့ တလကစပြီး ဗိုက်ခဏခဏအောင့်တာကို ရက်ဆက် ခံစားနေရတာကြောင့် အစာအိမ်အထူးကု ဆရာဝန် တယောက်နဲ့ပြပြီး လိုအပ်တဲ့ ဆေးစစ်ချက်တွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး ဓာတ်ရောင်ခြည်နဲ့ ကုသရမယ်ဆိုပြီး သူ့ဇနီးနဲ့ သားသမီးတွေက ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ဓာတ်ရောင်ခြည်ဌာနကို ခေါ်လာတာပါ။ “ဆရာဝန်က အသားကင်တွေစားလို့ ဓာတ်ရောင်ခြည်နဲ့ ကုသမှ ဗိုက်အောင့်ပျောက်မယ်ဆိုပြီး ပြောထားတာ။ အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ လူနာကို ပေးမသိသေဘူး” လို့ ဦးဇော်ဝင်းနိုင်ရဲ့ ဇနီးက ပြောပြပါတယ်။
မဖြစ်မနေ စားသုံးနေရမယ့် စားသောက်ကုန်တွေဟာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတာကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ ဦးဇော်ဝင်းနိုင်လို ရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ လူတွေ ထောင်သောင်းချီ ရှိနေမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ လမ်းဘေးမှာ ရောင်းချနေတဲ့ အသားကင်တွေမှာ လူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ E. Coli (Escherichia Coil) ခေါ် ဘက်တီးရီယား ပိုးတွေ တွေ့ရှိရကြောင်း ဆေးသုတေသန (အောက်မြန်မာပြည်) ကို ကိုးကားပြီး ပြည်တွင်းအခြေစိုက် ဂျာနယ် တချို့မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
“အစားအသောက်တွေမှာ ဆိုးဆေးတွေ ထည့်လာတယ်။ အသင့်စား အစားအသောက်တွေလည်း ပေါ်လာတယ်။ ဒီဟာတွေ အတွက် စစ်ဆေးတာတွေ မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ Shopping Center ကြီးတွေမှာ ရောင်းနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ ပြည်ပက ၀င်လာ တဲ့ ပစ္စည်းတွေက အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနအနေနဲ့ ဘယ်လို စစ်ဆေးပြီး ခွင့်ပြုနေလဲဆိုတာ မသိဘူး။ သူတို့ မညီညွတ်ဘူးပြောရင် ဈေးကွက်ထဲကနေ သိမ်းလိုက်တယ်။ ညီညွတ်တယ်ဆိုရင် ပြန်ပေါ်လာတယ်” လို့ အငြိမ်းစား ဆေးပညာ ပါမောက္ခ တဦးက ပြောပါတယ်။ ဆေးဝါး သုတေသီ ပညာရှင်တဦးကလည်း “FDA ထောက်ခံချက်ပါတိုင်း ယုံလို့ရလားဆိုတော့ ခဏခဏ သတင်းစာထဲကနေ ဘယ်အစားအစာကတော့ မစားသင့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ ဟာမျိုးတွေပဲကြည့်။ ဈေးကွက်ထဲ ဖြန့်ပြီးလို့ လူတွေစားနေကြပြီးမှ ဒီလို ကြေညာချက်ထုတ်ရတာ FDA က အစကတည်းက အရည်အသွေး မီ မမီ မစစ်ဆေးဘူးလား။ စစ်ဆေးရင်လည်း အဲဒီတုန်းက ဘာလို့ မတွေ့တာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးစရာပေါ်လာတယ်” လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
စာရေးသူ နရီလင်းလက် ဖြစ်ပါတယ်။ Google မှာ ရှာကြည့်တော့ ဒီဆောင်းပါး နာမည်နဲ့ ဆိုက်တော်တော် များများတော့ တွေ့နေပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကတော့ ကူးယူပြီး ဖေါ်ပြတာပါ။ လူတွေ သိသင့်တယ်ထင်လို့ပါ။ ပွိုင့် နုတ်မယ်ဆိုလည်း စိတ်ကြိုက်နုတ်နိုင်ပါတယ်။
အပြင်စာကို လုံးဝမစားဘဲ မရှောင်နိုင်တာကတော့ ကျနော်အပါအ၀င်လူတိုင်းပါ။
အဓိကအချက်ကတော့ ဘယ်အစားအစာကိုမှ အလွန်အကျွံမစားဘူးဆိုရင်
အဲ့ဒီ အကင်တွေကို ကင်မစားပဲနဲ့ ကြော်စားရင်ရော ဖြစ်တတ်လား ? ? ?
အိမ်မှာ ကြော်စားလေ ညီမရဲ့.. ကိုယ့်အိမ်က ဆီက လမ်းဘေးက ပလပ်စတစ် ဆီကြော်ထက်စာရင် သန့်တယ်မလား ကြော်စားတာထက် ပြုတ်စားတာကမှ ပိုကောင်းလေမလားတောင် တွေးမိတယ်
အသက်ဥာဏ်စောင့် ဆိုတာလဲ ရှိသေးတာပဲဗျာ… စားလဲစား၊ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်လောက်အောင်လဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလိုမလိုက်နဲ့ပေါ့ဗျာ… စီးပွားရေး သမားတွေကတော့ ရောင်းကုန်ရှိရင် ရောင်းမှာပဲ… ဒါပေမယ့် ကိုယ်စားမယ့်အစားအသောက်ကိုတော့ ချင့်ပြီးမှ စားတာကောင်းတယ်… အရသာ ကောင်းလဲ ကြိုက်ပေါ့ဗျာ… ကျန်းမာရေးအတွက်လဲ limit လေးလဲ ထားပေါ့….
ဆူး တင်ထားပေးတဲ့ ဝက်သားဒုတ်ထိုးပုံလေးတွေကို မြင်ရတာ ကိုယ့်ငယ်ချစ်ကိုသူတပါးရင်ခွင်ထဲမှာ တွေ့လိုက်ရသလို ခံစားမိပါတယ်။ ချစ်သောသူနဲ ကွေကွင်းရခြင်း ဆိုတဲ့ ဝက်သားဒုတ်ထိုးနဲ့ ဝေးကွာနေရခြင်းဟာ ဘဝရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတမျိုးပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ချစ်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့ အလွမ်းပြေလေးတော့ ဖြစ်လိုက်ပါ၏။ ဒါထက်၃၆လမ်းနဲ့ အနော်ယထာလမ်းမထောင့်မှာ ရောင်းလေ့ရှိတယ် လမ်းဘေးဝက်သားဒုတ်ထိုးနဲ့ ကြာဇံကြော်ဆိုင် ရှိသေးလားမသိ၊ သူ့ရှေ့မှာယုဇန ဒန်ပေါက်ဆိုင်လား မသိဘူးရှိတယ်။ ဒုတ်ထိုးပိုင်ရှင်တရုတ်ရဲ့ လည်ပင်းက ရွှေဆွဲကြိုးက လက်သန်းလောက်ရှိတယ်။ အဲဒီနားက ဖြတ်သွားရင် မစားပဲမနေနိုင်လို့ ရှောင်သွားရတယ်။
၁၉၉၈-၉၉ လောက်ကတည်းက ကျူရှင်တက်ရင် ၀ယ်စားနေကျ ဆိုင်တဆိုင်ရှိတယ် ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း နဲ့ အနော်ရထာလမ်း ထောင့်နားမရောက်တရောက် အဲဒီ ဆိုင်ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး ပိုင်ရှင် ရွှေဆွဲကြိုး ၀တ်တာ သတိမထားမိဘူး.ဒုတ်ထိုး ကြာဇံ သိပ်ကောင်းတာ အခု ထိလည်း အဲဒီ ဆိုင် ရှိသေးတယ် လူငယ်တွေ ဘဲ ရောင်းတာ အဲဒီ ဆိုင်က အခုတော့ လူကြီးတွေပေါ့လေ..သူတို့လည်း ၁၀နှစ်ကျော်အိုသွားပြီဆိုတော့။ အဲဒီ ဆိုင်ကတော့ စားကောင်းတယ်။ ဦးကြောင်ကြီး အိမ်မှာ လုပ်စားပါလား.. မခက်ပါဘူး ၀က်သားကို တရုတ်မဆာလာ ငံပြာရည် အကြည်ရေလေးနဲ့ သာပြုတ်လိုက်.. ကြက်သွန်ဖြူ ဆားနဲ့ ငရုတ်သီး ရောထောင်းပြီး မကျဉ်းနှစ်လေးနဲ့ ရောပြီး ငရုတ်ဆီ လုပ်လိုက်လေ။ ဒါဆို စားကောင်းမှာပါ။ ဘဲဥ မာမာလေး စားချင်ရင်တော့ ဘဲဥလေးကို ပြုတ် အခွံခွာ ဆား တရုတ်ပဲငံပြာရည် အကြည်လေးနဲ့ နယ် ၄နာရီလောက် ရေခဲ သေတ္တာ အောက်ထပ်မှာ ထားပြီး ၀က်သား ပြုတ်ရည်နဲ့ ချက်လိုက်.. ကောင်းမှ ကောင်း လျှာလည် သွားမယ် ငယ်ချစ်ဟောင်းနဲ့ ပြန်ပေါင်းလို့ရသွား ပါမည်။